gReader laghachiri afọ 4 na ntinye ego adịgboroja | Gam akporosis
gReader, otu n'ime ndị kachasị agụ RSS, na-adịghachi ndụ mgbe afọ 4 furu efu
gReader taa kwupụtara mwepụta nke mmelite ọhụrụ mgbe afọ 4 gachara okụrede ke Play Store. Ọ bụghị na a kagburu ya, mana na ọ nataghị mmelite ọ bụla, ọ bụ ezie na enwere ike iji ya; Ọ bụrụhaala na iwepụghị ya ma banye na nri site na Feedly, ebe ọ bụ ọnwa ole na ole enweghi ike.
N'ezie o nyere ọtụtụ, dịka onye na-ede ahịrị ndị a, ha kwesiri iga na ngwa ndi ozo dika Innoreader or Feedly; nke ikpeazụ bụ eziokwu na-enye ahụmịhe, na-enweghị akwụ ụgwọ, karịa arụmọrụ na oge a. Ugbu a ọ bụ oge ịche ma gReader ọ ka kwesịrị ka anyị laghachi.
1 Ndụ gReader na ndenye aha ego
2 Ozi banyere gReader: onye na-agụ ya nwere ihe karịrị nde 1 nbudata
3 Laghachi gReader?
Ndụ gReader na ndenye aha ego
Kedu ihe ijuanya ịmata na gReader alọghachila na ndụ mgbe afọ 4 gachara enweghị mmelite. Ma ọ bụ na anyị nọ n'ihu otu n'ime ndị RSS zuru ezu zuru oke. Zuru oke maka ịhazi ya na ngwa ya iji bulie ahụmịhe onye ọrụ ahụ dịka mkpa mmadụ.
Otu uru nke gReader, ọ bụrụhaala na ị họrọ ụdị nke akwụ ụgwọ, bụ enyocha ndepụta RSS echekwara ma ọ bụ edemede iji chọpụta nsonaazụ ọzọ ihe; njirimara nke di na nri di n'okpuru ugwo ugwo ma na anyi puru ichefu nke ukwuu ma oburu na anyi acho uzo, udi ma obu ihe obula.
Ma ọ bụ na anyị nwere 5.0.1 dị ukwuu nke gReader dị mgbe mbipute gara aga bụ 4.0.3 wepụtara na Machị 2017. Enweghị ihe ọ bụla maka ezigbo agụ RSS maka igwegharị anyị.
Maka ndị na-amaghị gReader, enwere ike ichikota ya na akwukwo RSS nke n’eme ka hazie ma gụọ akụkọ sitere na blọọgụ, mgbasa ozi, weebụsaịtị, na ndị ọzọ. Ọ na-enye gị ohere ijikọ akaụntụ Feedly n'efu iji nwee ike ịmekọrịta ozi niile n'ofe ngwaọrụ dị iche iche, ma nyekwa gị ohere iji Innoreader ma ọ bụ Olde Reader.
Uru ọzọ bụ na nwere usoro ngosi dị iche iche maka isiokwu iji hụ ya na ndepụta, grid ma ọ bụ ụdị kaadị.
Ozi banyere gReader: onye na-agụ ya nwere ihe karịrị nde 1 nbudata
Ihe ohuru Mmelite na-eweta ụfọdụ atụmatụ na ndozi dị mkpa na onye na-agụ RSS pa kacha mma maka gam akporo mobile. Anyị nwere ike ịgwa ọnọdụ gbara ọchịchịrị maka nzipu ozi ma ọ bụ nlele ederede, vidiyo ka mma na ọkpụkpọ pọdkastị, yana ọnụọgụ nke ndozi bug.
Nke a bụ ndepụta zuru ezu nke akụkọ:
Nwelite gReader ohuru na otutu ndozi na ihe mmezi
Ndegharị vidiyo ka mma
Ihe ọkpụkpọ Podcast ka mma
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị maka ilele edemede
Ndozi ahụhụ na ndozi
Kedu ee nke ahụ Agbaghara bu Pro version, ụdị akwụ ụgwọ nke nyere gị ohere ịnweta nhọrọ adịchaghị. Ugbu a, agbanweela ya na ndenye aha ego nke na-enye atụmatụ ndị ahụ. Inyocha, ebe ọ bụ na ọ kpochapụrụ ụdị Pro nke akwụ ụgwọ ya n'oge ya.
para onye ji Feedly eri nri, o gha agha agha ihe ịlaghachi na gReader ma ọ bụrụ na ịchọghị nke ọ bụla nke nhọrọ dị elu dị ka ịchọọ na ederede ederede na ndepụta.
Na, ebe gReader kacha mma kemgbe ọtụtụ afọ, n'ihi mmepe na-enweghị adị nke akụkọ na mmelite na atụmatụ nke ngwa ahụ kemgbe 2017, ọ nwere mere ka ọtụtụ n'ime anyị kwaga na ngwọta ndị ọzọ dịka Innoreader ma ọ bụ Feedly.
Ee ọ bụ eziokwu na n'ezie ruo mgbe m ga-emeghari atụmatụ nke ngwa ahụ gaa na nke oge a, ọtụtụ ga-esiri ya ike ịlaghachi, ebe ọ bụ na Feedly, dịka ọmụmaatụ, ma e wezụga imewe ahụ, nwekwara ọtụtụ ihe nkiri iji nye mmesapụ aka nke onye ọrụ mmesapụ aka na nke oge a.
gReader nwere mbipute n'efu na mgbasa ozi, na ego ọzọ dị n'okpuru ndenye aha iji wepu ya, nke na-enyekwa nkwado maka pọdkastị, ọgụgụ olu, na ọkwa nke onwe; n'agbanyeghị, maka € 1,19 kwa ọnwa na ịkwụ ụgwọ kwa afọ nke € 7,49.
Ugbu a, ị ga-ekpebi ma ị ga-alaghachi ma ọ bụ nọrọ ebe ị nọ anyị na-atụ anya ịnweta mmelite gRead ọzọ na imewe ka mma N'ime ngwa niile; ọ bụrụ na ọ bịarute ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » gReader, otu n'ime ndị kachasị agụ RSS, na-adịghachi ndụ mgbe afọ 4 furu efu
Chọta ọdịiche dị na mgbaghoju anya visual zoro ezo ala maka gam akporo
Mmemme mmemme ngwa ngwa Google kwụrụ $ 6,7 nde na 2020